Coral Reef: May 2011
Posted by ဇွန်မိုးစက် | Posted on Sunday, May 29, 2011
တိတ်ဆိတ်နေသော ဧည့်ခန်းအတွင်းက ဆိုဖာထိုင်ခုံရှည်ပေါ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခဲ့သမျှ အားပါးတရ ပစ်လှဲချလိုက်ရင်း အမောဖြေလိုက်သည်။ အမှတ်မထင် ဆိုဖာနောက်မှီပေါ်မှာ ရွှေဝါရောင် ဆံပင်ရှည်တစ်ချောင်းတွေ့မိတော့ သူ့ရင်ထဲ နာကျင်လွမ်းမောသွားသည်။
ခါတိုင်းလို အိမ်အပြန် တံခါးဖွင့်ဝင်လာချိန် ဆီးကြိုနေကျ အသံလွင်လွင်လေး မကြားရတော့သည်မှာ လအနည်းငယ်ပင် လွန်မြောက်ခဲ့ပြီ။ ညစာထမင်းဝိုင်းမှာ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်စွာ တစ်ယောက်တည်း စားခဲ့ရသည့်ရက်များကို သူ မရေတွက်ချင်တော့။
သူမပြင်ဆင်ပေးသော ပြင်သစ်ကြက်သွန်နီဟင်းရည်၊ အမဲသားနှပ်နှင့် ပြင်သစ်အာလူးကြော်ကို တမ်းတမိသည်။ ခုလိုသောကြာနေ့ညခင်းများ သူမ သူ့အနားမှာရှိနေလျှင် ဘယ်မှမသွားတော့ဘဲ ညစာကောင်းကောင်းစားပြီးသည့်အခါ နှစ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရ ရုပ်ရှင်ကားများကို တစ်လှည့်စီရွေးပြီး ကြည့်ကြသည်။ စနေနေ့မနက်ကို နောက်ကျမှ အိပ်ရာကထပြီး နက်စ်ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်ကို အချိန်ဆွဲသောက်ရင်း သူမမျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရခြင်းသည် သူ့အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော နံနက်ခင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အားလပ်ရက်နေ့လည်ခင်းများတွင် သူမနှင့်အတူ ဈေးဝယ်ထွက်ပြီး ပန်းချီပြခန်းတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်ကားသစ်တစ်ကားကို ၀င်ကြည့်ကြသည်။ ပြီးလျှင် သူနှင့်သူမထိုင်နေကျ ကော်ဖီဆိုင်သွား၍ ကော်ဖီသောက်ရင်း အစောပိုင်းက ကြည့်ခဲ့သော ပန်းချီကား သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ကားအကြောင်း၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကောင် စရိုက်များအကြောင်း သူမနှင့်အတူ အမြင်ဖလှယ်ပြောဆိုကြသည့် အချိန်များကို သူခုံမင်တမ်းတသည်။ အရိုးသားဆုံး ၀န်ခံရလျှင် သူမနှင့်အတူရှိနေသော အချိန်တိုင်းကို မည်သည့်အရာနှင့်မျှမလဲနိုင်လောက်အောင် သူ မက်မောတွယ်တာ နှစ်သက်နေခဲ့မိသည်။
ယခုတော့ သူသည် ရှင်းလင်းမနေသော ဧည့်ခန်းထဲမှာ၊ သန့်ရှင်းမှုလိုအပ်နေသော ထမင်းစားခန်းနှင် မီးဖိုခန်းမှာ တစ်ယောက်တည်း ကြေကွဲစွာ သူမ၏အရိပ်များကို မေ့ဖျောက်ဖို့ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ကြိုးစားအားထုတ်နေရသည်။ သူမနှင့်အတူ သွားနေကျနေရာများ၊ ကြည့်နေကျ ရုပ်ရှင်ရုံများသို့ မရောက်ဖြစ်သည်မှာတောင် ကြာခဲ့ပြီ။
သူမ နှုတ်မဆက်ဘဲ၊ အကျိုးအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ သူ့အနားမှ တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွာသွားခြင်းသည် သူ့ကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြော၍ လမ်းခွဲခြင်းထက် အဆပေါင်းများစွာပို၍ ထိခိုက်ခံစားစေခဲ့ကြောင်း သူမကို သိစေချင်ပါသည်။ သူမတစ်နေ့ ပြန်လာနိုးနှင့် စောင့်မျှော်ရင်း နေ့ရက်များ အေးခဲခြောက်သွေ့စွာ လွန်မြောက်သွားသည့်တိုင် သူမ သူ့ဆီ ပြန်မလာခဲ့ပါ။
အဲဒီနေ့က သူဆွဲရမည့် ပန်းချီကားအတွက် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်တစ်ဦးလိုအပ်နေချိန် ကျောင်းသားတစ်ယောက်က သူမကို ခေါ်လာပြီး မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ “သူ့နာမည်က မာရီယာတဲ့၊ အချိန်ပိုင်း ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ။ ဆရာ့အတွက် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုလို့ ကူညီချင်ပါတယ်တဲ့” ဆံပင်ရွှေရောင်အဆင်းနှင့် ကျော့ရှင်းပြေပြစ်သော ကိုယ်ဟန်သည် သူ့ပန်းချီကားအတွက်ထက် သူ့စိတ်အာရုံကိုပို၍ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများနှင့် အရောတ၀င်ဆက်ဆံလေ့မရှိသောသူသည် သူမကို စိတ်ဝင်စားသော်လည်း အလုပ်သဘောအရ တည်တည်တံ့တံ့ပင် ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့သည်။
မာရီယာကမူ သူ့ကို ဟိုးအရင်ကတည်းက တွေ့ဖူးမြင်ဖူးနေသူလိုပင် တရင်းတနှီးဆက်ဆံသည့်အတွက် သူစိတ်သက်သာရာရသွားပြီး သူမနှင့်ရင်းနှီးမှု ရခဲ့သည်။ အချို့သောညနေခင်းများတွင် သူ့အတန်းပြီးဆုံးသည့်အခါ မာရီယာရောက်လာပြီး သူမနှင့်အတူ ညစာစားဖို့ လာခေါ်တတ်သည်။ ပါရီမြို့တွင် သူ မရောက်ဖူးသော နေရာများ၊ ဆိုင်များကို သူမကပင် ဦးဆောင်ခေါ်သွားလေ့ရှိသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် မာရီယာသည် ခြောက်သွေ့ အထီးကျန်ဆန်သော သူ့နေ့ရက်များကို စိုပြည်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းအောင် ပြုလုပ်ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ထို့အတွက် သူ မာရီယာ့ကို ကျေးဇူးလည်းတင်၊ ချစ်လည်း ခင်ခဲ့ရသည်။
တကယ်တမ်း မိမိမွေးဖွားကြီးပြင်းရာဒေသနှင့် အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေသော သူ့နေ့ရက်များသည် သူမနှင့် မတွေ့ခင် အချိန်ထိ အထီးကျန်ခဲ့ရသည်။ ဆွေကြီးမျိုးကြီး လူကုံထံအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မွေးဖွားလာသောသူ့ကို မိဘဆွေမျိုးများက အဆင့်မြင့်အတန်းပညာသင်ယူပြီး ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အောင်မြင်ခဲ့သော မိသားစု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်စေချင်ကြသော်လည်း သူက အားလုံးကိုဆန့်ကျင်၍ သူစိတ်ပါဝင်စားရာ ပန်းချီအနုပညာ ဘာသာရပ်ကိုသာ အေးအေးလူလူ သင်ယူလိုသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းများနှင့်ဝေးရာ ပါရီမြို့ရှိ နာမည်ကျော် အနုပညာကျောင်းမှာ လာရောက်အပ်နှံ သင်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်းချီဒီဇိုင်း အနုပညာနှင့် ပတ်သက်လျှင် ပါရီမြို့ထက်ပို၍ကောင်းသော နေရာမရှိနိုင်ဟု သူယူဆမိသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပါရီမှာ ကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့အတွက် သူအခက်အခဲတွေ အများကြီးကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။ အရင်ဆုံး ပြင်သစ်ဘာသာကို လေ့လာသင်ယူရသည်။ ကျောင်းစရိတ်အတွက် အချိန်ပိုင်း အလုပ်များကို နေ့ဆိုင်းညဆိုင်းခွဲပြီးလုပ်ကာ ပိုက်ဆံစုခဲ့ရသည်။ မိဘဆွေမျိုးများ၏ ငြိုငြင်အမျက်ရှခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွာပြီး တစိမ်းတရံ လူမျိုးခြားများအလည်မှာ ရပ်တည်ခဲ့ရသည်။
သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ဗီဇပါရမီအခံကြောင့် ဒုတိယနှစ်ရောက်သည့်အခါ ဆရာများနှင့် အတန်းဖော်များ၏ အသိအမှတ်ပြု အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ အမေရိကန်လူမျိုးဆိုလျှင် အနည်းငယ်ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်သော ပြင်သစ်အတန်းဖော်တို့သည် သူ့ကိုတော့ ဖော်ရွေခင်မင်စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံလာခဲ့ကြသည်။ တတိယနှစ် အရောက်မှာတော့ သူနှင့်ပါရီသည် အတော့်ကို အသားကျသွားခဲ့ပြီ။ လေးနှစ်တာကျောင်းပြီးဆုံးသည့်တိုင် ပါရီမှ သူမခွာချင်သေး။ ပါရီမြေသည် သူ့အတွက် လေ့လာဆည်းပူးစရာ မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သူသင်ယူခဲ့ရာကျောင်း၌ပင် အချိန်ပိုင်း လက်ထောက်ပန်းချီဆရာအဖြစ် အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်။ သူ့အတွက် ပုံမှန်လစာငွေ ရရှိသွား၍ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ပါရီမှာပင် ဆက်လက်နေထိုင်လိုက်ဦးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပြီးမှာ မာရီယာနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပါရီသူ မာရီယာသာ သူ့ဘေးမှာ အမြဲရှိမည်ဆိုလျှင် သူ့ဘ၀၏ ကျန်ရှိသောနေ့ရက်များကို ပါရီ၌သာ ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်တော့မည်ဟု သူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အထိပင်။ အဲဒီလောက်အထိ သူမကို သူမြတ်နိုးခဲ့ရသည်။
နွေဦးဝင်စ သာယာသော စနေနေ့ညနေခင်းတစ်ခုတွင် စိတ်ပြေလက်ပျောက် သူလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့သည်။ စိန်းမြစ်ဖြင့် ခွဲခြားထားသော လက်ဖ်ဘင့်ခ်နှင့် ရိုက်ဘင့်ခ်မြို့နှစ်မြို့ကို သူ့စိတ်တွင်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နေမိသည်။ လက်ယာကမ်းပါးက ရိုက်ဘင့်ခ်မြို့တွင် လူချမ်းသာများ နေထိုင်ကြပြီး လက်ဝဲကမ်းပါး လက်ဖ်ဘင့်ခ်မြို့တွင် ပညာဆည်းပူးနေသူ၊ ဘ၀ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေသူ သူလိုလူအများစု နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ဝဲကမ်းပါးရှိ စိန့်ဂျာမိန်းလမ်းပေါ်မှ ကဖေးဆိုင်များတွင် သူနှင့်ဘ၀တူကျောင်းသားများ မကြာခဏထိုင်လေ့ရှိကြသည်။ မာရီယာနှင့်လည်း ထိုင်ဖူးသည်။ ရူးဒက်စ်က နက်တေးလမ်းပေါ်မှ ဈေးချိုသော စားသောက်ဆိုင်၊ ဒါမှမဟုတ် တက္ကသိုလ်လမ်းက စားသောက်ဆိုင်များတွင် သူတို့သွားရောက်စားသောက်ခဲ့ဖူးသည်ကို အမှတ်ရသည်။
မာရီယာသည် အချိန်ပိုင်းလစာငွေရသောသူ့အား သက်သက်သာသာ သုံးစွဲစားသောက်နိုင်အောင် ဈေးချိုသော ဆိုင်များကို ညွှန်ပြမိတ်ဆက်ပေးလေ့ရှိသည်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း အချိန်အားရလျှင်ရသလို သူ့အတွက် ညနေစာကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးသည်။ သူ့အ၀တ်တွေ ကူလျှော်ပေးသည်။ ပန်းကန်တွေ ဆေးပေးသည်။ အိမ်သန့်ရှင်းရေးကို သူ မတောင်းဆိုရပါဘဲ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ သူ့အတွက်တော့ အိမ်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက် ကောက်ရထားသလိုပင်။ သူမသိနားမလည်သေးသော ပြင်သစ်စာနှင့်စကားကိုလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြပေးသေးသည်။ ပြီးခဲ့သောဆောင်းဦးရာသီ၏ ခြေခင်းလက်ခင်း သာယာသောနေ့တစ်နေ့တွင် မာရီယာတစ်ယောက် အထုတ်ဆွဲကာ သူ့အိမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်။ သူအနည်းငယ် အံ့သြမိသော်လည်း ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ သို့သော်... သူပျော်ရွှင်ရသော နေ့ရက်များသည် ဟေမာန်စိမ့်အေး နှင်းဖွေးဖွေးကျနေသော ဆောင်းရာသီ မကုန်ခင် နေ့တစ်ရက်မှာပင် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။
ခေါ်သံတစ်ခုကြောင့် သူ့အတွေးနှင့်အတူ ခြေလှမ်းပါ ရပ်တန့်သွားသည်။ စိန့်မာတင်တူးမြောင်းဘေးက လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ တွေ့မြင်ရသော မိန်းကလေးသည် သူ့အတန်းထဲမှ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သော်လည်း သူမနာမည်ကို သူ ရုတ်တရက် မေ့နေသည်။ သူမက အံ့သြ၀မ်းသာစွာဖြင့် လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှ စာတစ်စောင်ထုတ်ပေးသည်။ သောကြာနေ့က ဆရာ့ကို ကျောင်းမှာ လိုက်ရှာသေးတယ်။ ဆရာ လူဗာပြတိုက်သွားတယ်ဆိုလို့…။ ဆရာ့နာမည်နဲ့ ဒီစာကို ကနေဒါက ကျွန်မမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပေးခိုင်းလိုက်လို့ပါ။
စာအိတ်ပေါ်က သူ့နာမည်နှင့် ကျောင်းလိပ်စာရေးထားသော အင်္ဂလိပ်လက်ရေးခပ်သော့သော့ကို သူ မရင်းနှီးပါ။ တပည့်မလေးကို သူကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပြီး စာကို လက်ခံယူလိုက်သည်။ နှုတ်ဆက်ခါနီးမှ တပည့်မလေးကပြုံးပြီး သူမနာမည်ကို ပြောသွားခဲ့သည်။ “ကျွန်မနာမည် ရှားလော့ပါဆရာ” တဲ့။ သြော်… ဟုတ်သားပဲ… ရှားလော့…ရှားလော့… သူ့စိတ်ထဲ ရေရွတ်နေယင်း တစ်ခါက သူ၊ မာရီယာနှင့် ရှားလော့တို့ စိန့်ဂျာမိန်းလမ်းပေါ်က ကော်ဖီဆိုင်မှာ တစ်ဝိုင်းထဲ အတူတူ သောက်ခဲ့ဖူးကြသည်ပဲ။ မာရီယာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့သော ကျောင်းသူသည် ရှားလော့တစ်ယောက်သာ ရှိဖူးသည်ကို သူအမှတ်ရသွားသည်။ ဒီစာက မာရီယာနဲ့များ ပတ်သက်နေမလား…။
သူစာကို အလောတကြီး ဖောက်ဖတ်လိုက်သည်။
ကျွန်မနာမည်ရင်းက “ဗယ်လာရီ” ပါ။ “မာရီယာ” ဆိုတဲ့နာမည်ကို ပါရီရောက်မှ မှည့်ခေါ်သုံးစွဲခဲ့တာပါ။ ကျွန်မရဲ့ မိဘနှစ်ပါးက ကနေဒါမှာအခြေချခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်နွယ်ဖွားဇာတိတွေပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ပြင်သစ်စာ၊ စကား ကောင်းကောင်းတတ်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အပြင် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်း နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါရီကို မလာခင်က ကျွန်မဟာ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြမယ်အေဂျင်စီတစ်ခုမှာ အချိန်ပြည့် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ရည်မှန်းချက်က တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဟန်ပြမယ်တစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မလက်ရှိအနေအထားထက် ပိုအောင်မြင်လူသိများဖို့ အမေရိကားက နာမည်ကျော်အေဂျင်စီတစ်ခုမှာ ပြောင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်လည်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးအရရော၊ နေရာပေးမှု အနေအထားပါ ထင်သလောက် မရခဲ့ဘူး မောင်။
ကျွန်မစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာပဲ မောင့်မေမေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ သူက ဒီအေဂျင်စီရဲ့ ၅၁ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူမို့ သူ့သြဇာအာဏာက အတော်လေးသက်ရောက်မှုရှိတယ် မောင်။ ကျွန်မကို ခေါ်တွေ့ပြီး သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ကိစ္စတစ်ခုမှာ အချိန်တစ်ခုအထိ အကူအညီပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မကို အကြီးတန်းကိုယ်ဟန်ပြမယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး နိုင်ငံတကာပွဲတွေအတွက် ၃နှစ် စာချုပ်ချုပ်ပေးပါမယ်တဲ့။ ကျွန်မလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့တယ် မောင်။ သူ့ကို အကူအညီပေးရမယ့်ကိစ္စက ကျွန်မအတွက်တော့ သိပ်မခက်ခဲပါဘူး။ တစ်ခုပဲ ပါရီသူ ပီသအောင် ပါရီမှာ ခြောက်လတိတိနေထိုင်ပြီး ပါရီသူတွေရဲ့ အပြောအဆို လေယူလေသိမ်း အမူအကျင့်တွေကို လေ့လာမှတ်သား ကျင့်ကြံရတာပါပဲ။ ပြီးတော့ မောင့်အကြောင်း အနည်းငယ်သိအောင် လေ့လာရပါတယ်။
အဓိကကတော့ မောင့်နှလုံးသားကို ကျွန်မဆီပါအောင်လုပ်ပြီး မောင့်ကို အသည်းခွဲခဲ့ဖို့၊ မောင် ပါရီမှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီး အမေရိကားပြန်ဖို့ တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်အောင် မောင့်မေမေက ကျွန်မကို မောင့်ထံအရောက် ကြံစည်စေလွှတ်ခဲ့တာပါ။ မောင် တတိယနှစ် ကျောင်းမစခင်ကတည်းက ကျွန်မ ပါရီမှာ ရောက်နေခဲ့ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ခုလောက်ဆို မောင်ကျွန်မကို သိပ်စိတ်ဆိုးနာကျည်း နေလောက်ရောပေါ့။
တကယ်တမ်း မောင်နဲ့အနီးကပ်ဆက်ဆံရမှ မောင်ဟာ ကျွန်မထင်သလို ရေပေါ်ဆီလူစားမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားရာ အနုပညာတစ်ခုအတွက် အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိလာရလို့ မောင့်ကို ကျွန်မ စိတ်ထဲက လေးစားမိပါတယ်။ နောက်ပြီး…. ကျွန်မ… မောင့်ကို…. ချစ်မိခဲ့ပါတယ်။ မောင့်မေမေ့က စာချုပ်မှာ ကျွန်မကို အချိန်ကန့်သတ်ပေးထားတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာ ကျွန်မ မောင့်ကိုချစ်ပါလျက်နဲ့ အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ လမ်းခွဲခဲ့ရတာပါ မောင်ရယ်။
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု လွန်မြောက်ရင် ကျွန်မ မောင့်ကို မေ့သွားမယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ မောင့်ကို တစ်ရက်မှ မေ့မရခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်မ မောင့်မေမေနဲ့သဘောတူထားတဲ့ စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး အေဂျင်စီကနေလည်း နှုတ်ထွက်လိုက်ပါပြီ။ မောင့်မေမေက ဒီကိစ္စအတွက် မောင့်ကို မရိပ်မိစေချင်၊ ကျွန်မကို နှုတ်လုံစေချင်ပေမယ့် မောင့်ယုံကြည်မှုကို ကျွန်မပြန်ရဖို့အတွက် မောင့်ကိုပြောပြလိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သားအတွက် အတ္တကြီးခဲ့တဲ့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့လုပ်ရပ်ကို မောင်နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်မကတော့ မောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုမေ့ပစ်ပြီး မောင်ချစ်တဲ့ပါရီမှာပဲ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အေးအတူပူအမျှ နေသွားကြရအောင်လို့ ကျွန်မတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
နွေဦးမကုန်ခင်တစ်ရက်မှာ မောင့်ဆီကို ကျွန်မ ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဆုံနေကျ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသွားဖူးနေကျ နေရာတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ မောင့်ကို လာတွေ့ပါ့မယ်။ အဲဒီ့အခါကျမှ မောင်ကြိုက်သလို ဆုံးဖြတ်ပါနော်။
သူစာဖတ်အပြီးမှာ ခံစားချက်ပေါင်းစုံဖြင့် တခဏမျှ ငေးငိုင်သွားသည်။ သြော်….မေမေ၊ မေမေ သူ့နှုတ်မှဖွဖွ ရေရွတ်မိသည်။ မာရီယာပြောသလို အားလုံးကို ဗွေမယူဘဲ မေ့ပစ်လိုက်ရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ခုချက်ခြင်းပဲ ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး…. မေမေ့အကြံတွေအားလုံး ကျွန်တော်သိခဲ့ပြီလို့ ပြောပစ်လိုက်ရမှာလား…။ သူဝေခွဲမရဘဲ သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက် ချလိုက်မိသည်။
ဟင့်အင်း… မဆက်တော့ပါဘူး။ မင်းသာ ကိုယ့်အနားပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်စရာ မလိုတော့ပါဘူးကွယ်။
မာရီယာ… မင်းတကယ် ကိုယ့်ဆီပြန်လာမှာလား။ နွေဦးမကုန်ခင် တကယ်ပဲ ကိုယ့်ဆီ အရောက်ပြန်လာမှာလား…။ သူ့အတွေးတွေ မဆုံးသေးခင်… သူ့ခြေလှမ်းတွေက ကော်ဖီဆိုင်လေးရှိရာကို…။ တကယ်ဆို နွေဦးကုန်ဖို့ ရက်အနည်းငယ်သာ လိုတော့ကြောင်း သူသတိရသွားသည်လေ...။
မာရီယာနှင့်သူ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြသော ညနေခင်းတစ်ခုက ပါရီမြို့၏ ဆည်းဆာချိန်ခါသည် သူ့တစ်သက်တာတွင် အလှဆုံးဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံပြောဆိုဖို့ လိုတော့မည်မထင်ပါ။
စာရေးဆရာကြီး Sidney Sheldon ရဲ့ Master of the Game ၀တ္တုထဲက စတုတ္တအပိုင်းမှာပါတဲ့ တိုနီ့အကြောင်းကနေ ဆင့်ပွားခံစားပြီး ဒီစာစုလေး ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ရေးထားတာ အတော်ကြာခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့မှပဲ အပြီးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစာရေးလက်စမှာပဲ ငယ်ငယ်ကကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ Savage Garden ရဲ့ Truly Madly Deeply Original Music Video ကို YouTube ကနေ အမှတ်မထင် ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်တိုင်ဆိုင်ဆိုင် သူ့သီချင်းနောက်ခံက ပဲရစ်မြို့မှာ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လေတော့ အဲဒီ့ဗွီဒီယိုလင့်ခ်ကို ထည့်ချင်စိတ်ပေါ်သွားပြီး အဆုံးသတ်ကိုလည်း ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ ဆက်စပ်မိသွားအောင် ရေးဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။
စာဖတ်ပြီးမှ သီချင်းဗွီဒီယိုလင့်ခ်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ဇွန် အကြံပြုပါတယ်။း)
စာကြွင်း။ ။ ပါရီမြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် နာမည်အခေါ်အဝေါ်များ မမှန်ကန်ခဲ့ရင် ဇွန်မိုးစက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဇွန်မိုးစက် | Posted on Monday, May 16, 2011
Category: Miscellaneous , Sharing
တလောက blogspot မှာ error တက်ပြီး ဘလော့ဂ်ထဲ ၀င်မရတဲ့အခါ၊ ကော်မန့်တွေဖတ်မရတဲ့အခါ စိတ်ပူပင်ပြီး ဒိုမိန်းဝယ်ပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားပြောဆိုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းရောင်းရင်း ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေ ဖဘမှာ မြင်လိုက်ရလို့ ဒီပို့စ်လေး ရေးမိပါတယ်။
ဇွန်တို့ မြန်မာတွေ ဒိုမိန်းနာမည်ယူတဲ့အခါ ဒေါ့ကွမ်း “.com” ကို ယူသုံးကြတာ တော်တော်များများ တွေ့ရပေမယ့် .com ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတာ စူးစမ်းသိရှိကြတဲ့သူ နည်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ domain name extension ရဲ့ အတိုကောက် တစ်ခုစီတိုင်းမှာ သူ့အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်ကိုယ်စီ ရှိပါတယ်။ com ဆိုတာ commercial ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ အကျိုးအမြတ် စီးပွားကို ရည်ရွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် website များအတွက် domain extension ဖြစ်ပါတယ်။ .info ကတော့ လူတိုင်းသိလွယ်တဲ့ information ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။ .net ကျတော့ network ရဲ့အတိုကောက် extension ဖြစ်ပြီး .org ဆိုရင် အသင်းအဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ organization ကို ရည်ညွှန်းတာပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ့် website ဟာ အကျိုးအမြတ်စီးပွားကိုလည်း မရည်ရွယ်ဘူး၊ ၀ါသနာအရ ရေးသားတင်ပြတဲ့၊ သတင်းအချက်အလက်ပေးတဲ့ website မျိုးဆိုရင် .com ကို မသုံးရပါဘူး။ blogspot ကနေ migrate လုပ်သွားတဲ့ domain extension တော်တော်များများ .com ကို ပြောင်းသုံးတာ တွေ့ရတဲ့အခါ သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင်ရော၊ .com ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူပါ 'com' ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကျကျနန မသိလို့ပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
Twilight ဖန်တီးရှင် Stephenie Meyer တို့လို နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတွေရဲ့ website, 'www.stepheniemeyer.com' လိုမျိုးကျတော့ သူတို့ရေးခဲ့၊ ထွက်ခဲ့တဲ့ စာတွေတင်ထားရုံသာမက သူတို့ရဲ့ နောက်ထွက်မယ့် စာအုပ်အသစ်ကိုပါ website မှာ တစ်ခါတည်း promote လုပ်၊ order လက်ခံပြီး စာအုပ်ပါ ရောင်းကြတာမို့ .com ကို သုံးစွဲကြတာပါ။
တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ကဏ္ဍအလိုက် ဒိုမိန်းအမည်နာမ သုံးစွဲကြပုံလေးတွေလည်း ကွာခြားတတ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ကျောင်း website တွေမှာ Education ရဲ့ အတိုကောက် ‘edu’ ကို သုံးစွဲပြီး၊ ယူကေနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး website တွေမှာတော့ Academic ရဲ့အတိုကောက် ‘ac’ လို့ သုံးစွဲတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ - www.ntu.edu.sg နဲ့ www.nottingham.ac.uk ။ ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ အစိုးရသုံး website တွေမှာတော့ domain name နောက်က extension မှာ Government အတိုကောက် ‘gov’၊ အဲ့ဒီနောက်မှာမှ နိုင်ငံအမည် .sg, .uk လိုက်တာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။ www.moh.gov.sg (MOH - Ministry of Health) နဲ့ www.dh.gov.uk (DH - Department of Health) လိုမျိုး website တွေပေါ့။
.com, .net, .info, .org, .travel တွေက လူသုံးအများဆုံး international domain extension တွေ ဖြစ်ကြပြီး၊ .im (Instant Messaging), .com.im, .net.im, .tv တို့ကျတော့ co-brand domain name ဖြစ်သွားပါတယ်။
Domain name ၀ယ်ယူသုံးစွဲတဲ့အခါ domain extension ရဲ့ အခြေခံအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကို သဘောပေါက်ထားရင် ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် domain name ကို ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်ပြီပေါ့ရှင်။
Posted by ဇွန်မိုးစက် | Posted on Saturday, May 07, 2011
Category: Essay , In life
ဆရာဖေမြင့်၏ စာအုပ်များနှင့် ကျွန်မ စတင်ရင်းနှီးခဲ့ချိန်သည် ဆယ်တန်းဖြေပြီးခါစ ဆယ့်ခုနစ်နှစ်အရွယ်သာသာမှာ။ ပထမဆုံးဖတ်ရှုမိသော စာအုပ်မှာ “နှလုံးသား အာဟာရ ရသစာများ” ဖြစ်သည်။ အဲသည့်အချိန်တုန်းက တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေလည်း ပိတ်ထားသော အချိန်ဖြစ်၍ စာအုပ်မျိုးစုံကို စိတ်တိုင်းကျ ဖတ်ရှုခွင့်ရနေချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ အပျော်ဖတ်ဝတ္ထု၊ ဘာသာပြန်၊ တက်ကျမ်း အစရှိသော စာအုပ်အမျိုးအစားများထဲတွင် တက်ကျမ်းကို ကျွန်မ အလွန်နှစ်ခြိုက်သဘောကျပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရွယ်ကလည်း ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဖြစ်ပြန်၊ စိတ်ကူးမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ဘ၀ခရီးကို စတင်နှင်တော့မည်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များလည်း ရှိနေချိန်ဖြစ်၍ တက်ကျမ်းများကို ဖတ်ပြီးလျှင် ကျွန်မ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ထက်မြက်တက်ကြွပြီး အရာရာကို ရဲဝံ့စွန့်စားရန် အသင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။
တကယ်တော့ ဆရာ့စာအုပ်များထဲတွင် တက်ကျမ်းတွေသာမက စိတ်ခံစားမှု၊ နှလုံးသားခံစားမှုကိုပေးသော စာစုတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသည်။ “ဘ၀ဒဿန ရသစာများ” ဆိုလျှင် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ဖတ် ကျွန်မအတွက် မရိုးနိုင်အောင် စိတ်နှလုံးနူံးညံ့ သိမ်မွေ့မှုတွေကို ပေးသည်။ ဆရာဘာသာပြန်ဆိုသည့် ရုရှားစာရေးဆရာကြီး ချက်ကော့ဗ်၏ “လူနာဆောင် အမှတ်ခြောက်” လို ဘာသာပြန်စာပေကိုလည်း နှစ်ခြိုက်သည်။ “စိန်မြေဧကပေါင်းများစွာ၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီးလား၊ ဦးနှောက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ သင့်စိတ်သင့်အတွေးအကြံများ အတိုင်းသာ၊ ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒေးလ်ကာနက်ဂျီ၊ စာဖတ်သမား၏ မှတ်စုများ” … အစရှိသည့် ဆရာပြန်ဆိုသော စာအုပ်တော်တော်များကို ၀ယ်ယူစုဆောင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မနှင့်မောင်လေးက မုန့်ဖိုးများကို စုဆောင်းပြီး နှလုံးသာ အာဟာရစာအုပ်များကို ၀ယ်၍ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းများကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့သေးသည်။
ဆရာ့စာအုပ်တွေထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ကျွန်မနှင့်မောင်လေး အပါအ၀င် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကို လွှမ်းမိုးခဲ့သော စာအုပ်မှာ “စိန်မြေဧကပေါင်းများစွာ” ဖြစ်သည်။ အဲသည်စာအုပ်ကို ညွန်းသူက ကျွန်မလေးစားအားကျမိသူတစ်ယောက်၊ စာအုပ်ကို ၀ယ်လာခဲ့သည်မှာ ကျွန်မမောင်လေး။ စာအုပ်ဖတ်အပြီး နှစ်ခြိုက်သဘောကျလွန်း၍ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ပေးဖတ်ရင်း လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြသည်။ ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်တက်ကြွသော ဘ၀အစမှာ အဲသည့်စာအုပ်ကို ဖတ်ခွင့်ရခြင်းအတွက် ကျွန်မ သိပ်ကိုကျေနပ်မိပါသည်။ ကျွန်မဘ၀ကိုလည်း အထိုက်အလျောက် ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။
စာအုပ်ထဲတွင် အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ အဝေးကြီးမှာ သွားရှာစရာမလို၊ မြင်တတ်လျှင် လမ်းတစ်ကမ်းမှာပင် ရှိကြောင်းကို ဖြစ်ရပ်မှန် ပုံတိုပတ်စ ဥပမာများပေးကာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးသားထားသည်။ စာအုပ်ထဲမှာပါသည့် ရပ်ဆယ်ကွန်းဝဲလ်ဆိုသော လူကိုလည်း သိပ်သဘောကျမိသည်။ လူချမ်းသာတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘဲ သူ့အစွမ်းအစကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ဆောက်ဖြစ်ခဲ့သည် ဆေးရုံတွေ၊ ကျောင်းတွေက မနည်း။ တစ်နေ့ ၂၄နာရီမှာ လူနှစ်ယောက်စာအတွက် အလုပ်လုပ်သွားသော သူ့ကို အားကျမိသည့်အတွက် ကျွန်မ ကျောင်းနှစ်ခု တစ်ပြိုင်တည်း တက်ဖြစ်သွားသည်။ ပညာရပ်နှစ်ခုအတွက် စာမေးပွဲကို တစ်လအတွင်းမှာ ရက်တွေမခြားဘဲ တပြိုင်နက်တည်း ဆက်တိုက်ဖြေနိုင်ခဲ့သည်။ အဲသည့်အချိန်တုန်းက ရရှိခဲ့သည့် exam result များသည် အခြားအချိန်တွေမှာ ပညာရပ်တစ်ခုတည်းအတွက် ဖြေရသော ရလဒ်များထက် ပို၍ အမှတ်တွေ၊ grade တွေ ကောင်းခဲ့သည်။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်၏ စွမ်းရည်သည် ကိုယ်မြှင့်လျှင် မြှင့်တင်နိုင်သလောက် အဆတိုးကြောင်း ကျွန်မလက်တွေ့ သိခွင့်ရလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သောတစ်ပတ်က ကျင်းပခဲ့သော စင်္ကာပူနိုင်ငံ တတိယအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲမှာ ဆရာက “ဘ၀တိုးတက်ဖို့ စာဖတ်ကြစို့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာဖတ်ခြင်းကြောင့် ရလာသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကြောင့် ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲသွားပုံများအကြောင်းကို အားပါးတရ ဟောပြောသွားသည်။ ဆရာ့ဟောပြောချက်များကို နားထောင်ရသည်မှာ ဆရာ့စာအုပ်များကို ဖတ်သောအခါ ရရှိသည့် ခံစားချက်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်ဖတ်ကြခြင်း အကြောင်းအရင်း ၄မျိုးကို ဆရာက ပရောဂျက်တာဖြင့် ဖွင့်ဆိုပြောပြသွားသည်။ သတင်းအချက်အလက်တွေ သိရှိဖို့ (Information)၊ စိတ်ပင်ပန်းမှုကို အနားယူဖြေဖျောက်ဖို့ (Entertainment/ Relaxation)၊ ရင်ထဲက အစိုင်အခဲ၊ မကျေနပ်မှုတွေ ချေဖျက်ပေါ့ပါးဖို့ (Sublimation)၊ စိတ်အားတက်ကြွလှုံ့ဆော်မှုတွေရဖို့ (Inspiration) စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်ငါးရက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရသော ကျွန်မအဖို့ ယခုအခါ စာအုပ်ကိုင်မိလျှင် အခြားအကြောင်းရင်းတွေထက် အလယ်နှစ်ချက်ကြောင့် ဖတ်မိသည်က ပိုများသည်။
စာအုပ်ဖတ်ခြင်းကြောင့် သတင်းအချက်အလက် (Information) ၊ အတွေးအမြင် ဗဟုသုတ (Knowledge) ကြွယ်ဝပြီး အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်း ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်ကာ (Wisdom --> Judgement --> Decision Making --> Achievement – Success in Life) ဘ၀တွင် အောင်မြင်တိုးတက်မှုရသော အကြောင်း ၃မျိုးကို အမေရိကန်သမ္မတ အေဗရာဟင်လင်ကွန်းနှင့် ဥပမာပေးပြီး ဟောပြောသွားသည်။ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူ၊ အမြင်ကျယ်သူ၊ နှိုင်းချိန်စဉ်းစားတတ်သူ၊ ဦးနှောက်ရော နှလုံးသားပါ ရင့်ကျက်ပြည့်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာသည်ဟု ဆရာပြောသွားသည်ကို ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်တွင် စာဖတ်သူ၊ မဖတ်သူများ၏ အတွေးအမြင်ကွာခြားပုံကို နှိုင်းယှဉ်မိပြီး ထောက်ခံယုံကြည်သည်။
ကျွန်မဘ၀ကိုလည်း စာဖတ်ခြင်းက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြောင်းလဲမှုအကျိုးတရားတွေ ပေးခဲ့သည်။ တက်ကျမ်းစာအုပ် အမျိုးအစားများဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အပျော်ဝတ္ထုများကို လုံးဝမဖတ်ချင်၊ မဖတ်ဖြစ်တော့အောင် စာဖတ်လမ်းကြောင်း သိသိသာသာ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်မ ဘ၀တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် အတွေးအမြင်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲပေးခဲ့သော စာနှစ်အုပ်လည်း ရှိခဲ့သည်။ စိန်မြေဧကပေါင်းများစွာနှင့် ပေါ်လီယာနာ။ ပေါ်လီယာနာကြောင့် ကိစ္စအတော်အများများတွင် အနှုတ်လက္ခဏာအမြင်ရှိခဲ့သော ကျွန်မသည် အကောင်းမြင်ဝါဒ၊ အပေါင်းလက္ခဏာသဘောဆောင်ပြီး ကြည့်မြင်တတ်သူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်မအသက် ၂၁နှစ်တွင် ဒီပလိုမာ ၇ခုရရှိခဲ့ပြီး၊ အသက် ၂၃တွင် ဒီပလိုမာ ၈ခုနှင့် ဘွဲ့တစ်ခု ရရှိခဲ့ခြင်းသည် “စိန်မြေဧကပေါင်းများစွာ” စာအုပ်၏ ကျေးဇူးတရားက အရင်းခံပါသည်။
ကျွန်မစိတ်ဓာတ်တွေကျနေချိန် စာအုပ်တွေက စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို ပေးသည်။ ကျွန်မရင်ထဲက အစိုင်အခဲတွေကို စာဖတ်ခြင်းဖြင့် သက်သာရာရစေသည်။ စာဖတ်ခြင်းသည် ကျွန်မဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါလှသည်။ ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မ အရင်ကလို စာအုပ်တွေ စွဲစွဲမြဲမြဲ မဖတ်ဖြစ်တော့တာကို တွေးမိတိုင်း ကျွန်မဘ၀မှာ တစ်ခုခုလိုနေသလိုလို၊ ကျေနပ်အားရမှုမရှိသလို ခံစားရသည်။ ဆရာဖေမြင့်၏ စာအုပ်များကိုတောင် မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာသွားပြီ။ ကိုယ်တိုင်က စာဖတ်သူအဖြစ်မှနေ၍ စာရေးသူအဖြစ် ပြောင်းလဲကြိုးပမ်း အားလျော့နေခဲ့ချိန်မှာ ဆရာ့၏ “နာမည်တစ်လုံး ရမလာခင်တုန်းက” စာအုပ်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကျွန်မ၏ စာရေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော စိတ်ကူးရည်မှန်းချက်လေးတွေ ပြန်လည်နိုးထ ရှင်သန်လာခဲ့သည်။ အဲသည့်စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီး စိတ်ဓာတ် ခွန်အားတွေ တစ်ဖန်ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။
နှလုံးသား အာဟာရရသစာမှ စတင်ကာ နာမည်တစ်လုံး ရမလာခင်တုန်းကစာအထိ ဆရာ့စာအုပ်များသည် ကျွန်မကို ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကူးယဉ် လူငယ်ဘ၀မှနေ၍ လက်တွေ့ကျသောလူကြီးဘ၀အထိ ယခုချိန်တိုင်အောင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အကျိုးပြုနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
Posted by ဇွန်မိုးစက် | Posted on Tuesday, May 03, 2011
အားလပ်ရပ်တွေမှာ တစ်ရက်မှ မနားအားဘဲ အလုပ်တွေများနေတဲ့ ကိုယ်က အထက်တန်းတုန်းက သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Leisure ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ပြန်အမှတ်ရသွားလို့ Google ကနေ ပြန်ရှာပြီး တင်ထားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်တော့ no time to surf net and chat, no time to read, blog and write ပေါ့။